बलिउडका महँगा कलाकार कसले कुन चलचित्रमा पारिश्रमिक लिएनन् त ? हेर्नुहोस् ! – Khabar PatrikaNp
बलिउडका महँगा कलाकार कसले कुन चलचित्रमा पारिश्रमिक लिएनन् त ? हेर्नुहोस् !
विश्वकै ठूलो चलचित्र उद्योग मध्ये एक रहेको बलिउडका कलाकारहरु करोडौं पारिश्रमिक लिने गर्छन्। चलचित्र भित्र रहेको एकै गीतमा देखा परेको समेत कलाकारहरु करोडौं पारिश्रमिक लिन्छन्।
विशेष गरेर आइटम नम्बरमा देखा पर्ने नायिकाकाहरुले करोडौं पारिश्रमिक पाउँछन्। तर केहि कलाकारहरुले भने मनको शान्तिको लागि र नजिकका व्यक्तिहरुले निर्माण गरेको चलचित्रमा पारिश्रमिक नलिएको उदाहरण पनि छन्। कसले कुन चलचित्रमा पारिश्रमिक लिएनन् त ? हेर्नुहोस् !
फिल्म अग्निपथको शानदार आइटम नम्बर “चिकनी चमेली” मा क्याटरिनाले आइटम डान्स गरेकी थिइन्। यो गीत धेरै हिट पनि भयो । तर यो गीतको लागि क्याटरिनाले क्याटरिना लिएकी थिइनन्। तर गीत धेरैनै हिट भएको कारण करण जोहरले क्याटरिनालाई फरारी कार गिफ्ट गरेका थिए।
अभिनेत्री रानी मुखर्जीले “कभी खुशी कभी गम” चलचित्रमा सित्तैमा काम गरेकी थिइन्। यस चलचित्रको लागि रानीले निर्माता करण जोहरसँग एक पैसा नलिइ काम गरेकी थिइन्।
अमिताभ बच्चन बलिउडका सबै भन्दा व्यस्त व्यक्तित्वमा पर्छन्। तर उनले भोजपुरी चलचित्रहरु गंगा , गंगोत्री , र गंगा देवीमा सित्तैमा काम गरेका थिए। संजय लीला भंसालीको फिल्म ब्ल्याकमा पनि उनले निशुल्क काम गरेका थिए।
“भूतनाथ” मा सफल अभिनय गरेका शाहरुख खानले यसको सिक्वेलमा निशुल्क काम गरेका थिए। “भूतनाथ रिटर्न” मा सानो भूमिका मात्र रहेको हुँदा उनले यस चलचित्रमा बिना पारिश्रमिक काम गरेका थिए।
चलचित्र “बोस” को एक गीतमा अक्षय कुमारसँगै सोनाक्षी देखा परेकी थिइन्। यो गीतमा देखा पर्नको लागि सोनाक्षीले कुनै पारिश्रमिक लिएकी थिइनन्।
फरहान अख्तरको करियरकै सबैभन्दा सफल चलचित्र “भाग मिल्खा भाग” हो भन्दा फरक नपर्ला। यो चलचित्र धेरैनै हिट भएको थियो। यस चलचित्रमा काम गरेवापत पारिश्रमिक लिन फरहानले अस्विकार गरेका थिए। पारिश्रमिकको रुपमा उनले ११ रुपैयाको एक टोकन र आशीर्वाद मात्रै लिएका थिए।
यस्तै दीपिका पादुकोणले चलचित्र “ॐ शांति ॐ” मा शाहरुख खानसँग काम गर्न पाएको खुशियालीमा पारिश्रमिक नलिइ काम गरेकी थिइन्। प्रियंका चोपडाले पनि शाहरुख खान प्रति सम्मान व्यक्त गर्दै चलचित्र “बिल्लू” को गीतमा देखा पर्दा कुनै पारिश्रमिक लिएकी थिइनन्। सोहि गीतमा देखा परेकी करिनाले पनि बिना पारिश्रमिक काम गरेकी थिइन्।
Prevसरकारले घटस्थापनाको दिनदेखि पूर्णिमासम्म सरकारी कार्यालयहरु बन्द गर्न तयारी
Nextएक शिक्षकको टाउको काटेर हत्या,गरेर भाग्दै गरे पछि प्रहरीले उनलाई गोली हानि मारे
यी हुन् १५ मिनेटमै अनुहारको चमक बढाउने उपाय… जानी राखौ
श्रीमानले मान्नु भएन, १७ बच्चा फालिसकेँ’
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि दैलेखको गुराँस गाउँपालिका सिल